17/05/2018 admintriatra Tresaka 0
Na iza hilaza na iza hiteny, tsy mandroso velively izao diantsika izao fa « mihemotra! ». Na hilaza inona na hiteny ahoana ny MAPAR sy ny TIM ary ireo mpanara-dia azy ireo, tsy tsara noho ny tamin’ny roa volana nialohan’ny nisian’izao korontana izao ny fari-piainan’ny firenena amin’ny ankapobeny. Efa firy sahady ireo mpizaha tany nanafoana ny diany ho aty Madagasikara, firy ireo fikambanana tsy miankina na ONG nanafoana ny tetikasany, firy ireo efa very asa fivelomana, sns.
Mampalahelo tokoa ity Madagasikara ity, sanatrian’izany toa firenena voaozona ka tsy afaka hanao dingana mankany aloha na oviana fa “mihemotra” hatrany. Rahampitso ihany anefa dia hanenina, rahampitso ihany anefa dia hijinja izay nafafy fa rahampitso ihany koa dia hihemotra indray. Fanenenana nge no nisy teto taorian’ny krizy 1991-2002-2009 e! Nitotongana ny vola, niakatra ny vidim-piainana, tsy nisy ny asa, nirongatra ny tsy fandriam-pahalemana, sns. Samy nilaza sy niteny ho latsa-panenenana daholo isaka ny avy mandalo krizy, ary misy mihitsy aza ireo milokaloka no leo krizy sy tsy manaiky ny hisian’izany intsony saingy indrisy…
Izao no fotoana ilàna ireny mpahay ara-toekarena ireny mba hanomezan’izy ireo tarehimarika mikasika ny fatiantoky ny firenena isan’andro, amin’ny sehatra maro, isaka ny latsaka anaty hantsana tahaka izao ny firenena. Mihazakazaka any amin’ny teknolojia maoderna sy ary fomba izao tontolo izao, fa isika kosa « mihemotra » lava. Mbola marin-toerana ihany aloha hatramin’ny androany ny vidin’ny PPN noho ny ezaky ny fanjakana sy ny fiaraha-miasa amin’ireo matihanina. Fa tsy misy mahafantatra ny hambaran’ny rahampitso isika vokatr’izao korontana sy savorovoro izao ; eo rahateo koa ireo mpanararaotra izay miandry irika fotsiny hahazoana tombony mihoatra ny tokony ho izy.
Ny zavatra azo antoka aloha dia ny hoe: « efa ratsy noho ny tamin’ny volana Janoary 2018 ny fiainam-pirenena amin’izao anio izao. Efa nihemotra indray isika, ary azo ambara ho taona very sy fotoana lany fotsiny izay efatra taona nanarenana ny fahavoazana nateraky ny krizy 2009 izay ».
123Movies dans Fanisam – bahoaka-HATOMBOKA ETO ANALAMANGA SY ANDROY
satta matka dans Fivoriamben’ny firenena mikambana: NISOKATRA HO AN’I MADAGASIKARA NY VARAVARANA
Novidiana toa ny mividy hena eny an-tsena ny fahazoan-dalana mitrandraka harena an-kibon’ny tany nandritra ny fotoana nitondran’ny filohan’ny Tetezamita Andry Rajoelina. Mahatratra 800 eo ho eo ireo fahazoan-dalana niparitaka, izay mahatratra 93% an’ireo fahazoan-dalana nomena ...Tohiny
click here: A lot of thanks for all of the work on this blog. Gloria enjoys conducting investigations and it's really obvious…
accredited online ekg course: Title [...]Here are some of the web sites we advise for our visitors[...]